Sheeko isku mid ah, hadda oo leh GPS - Geofumadas
Sheeko isku mid ah, hadda oo leh GPS
Sebtember, 2008 cadastre, Geospatial - GIS, GPS / Qalabka, egeomates My
... Boqortooyadaas, farshaxanka sawirqaadku waxa uu gaadhay sida quruxda badan ee khariidada gobolka oo kali ah magaalada oo dhan khariidada oo ka mid ah boqortooyadii, gobolka oo dhan.
Wakhti ka dib, khariidadaha waawayn ee aan kor ku soo sheegnay ma aysan qancin iyo dugsiyada ee sawir qaadayaasha waxay kor u qaadeen khariidadda boqortooyada, taas oo ahayd xajmiga boqortooyadii iyo kudhow markasta oo isaga la socda.
In yar oo lagu daro daraasadda kartoonka, jiilalka soo socda waxay fahmeen in khariidadan la kiciyay ay ahayd wax aan faa'iido lahayn oo aan lahayn wax cabsi ah oo ay ku siiyeen aagagga qorraxda iyo kiciyeyaasha.
Dhulka lamadegaanka waxaa ku jira burbur burbursan khariidada, oo deggan xayawaanka iyo u ducaysta, dalka oo idil ma jiro cid kale oo la mid ah farsamooyinka juquraafi ahaaneed.
Waxaa cajiib ah in sheekadani ay markii ugu horreysay la qoro qof magaciisa la yiraahdo Suárez Miranda, 1658 (xiitaa xitaa Txus wuxuu ku dhashay 🙂) buug la yiraahdo "Journey of ragga ra'yiga".
Waxay u muuqataa caan sababtoo ah Jorge Luis Borges ayaa ka soo shaqeeyay shaqadiisa "Taariikhda Caalamiga ah ee Infamy" ee 1957, laakiin wuxuu leeyahay isla ansaxnimada shuruudaha tixraaca ah ee aan u arko in aan arko sahan cadcad.
Qaladaadka wareega ugu yar ee 10 cm. Wixii kacdoon rustic ah ee a kaynta qoyan? Maya, mahadsanid, waxaan si fiican u qaataa galinka dambe ee aan akhriyo akhristayaasha aan doorto qaybta gabayada ah ee yar oo i garanaya
... wadankan (kan kale) ee Pyrenees, farshaxanka gaasojiinta gaareen heerarka noocan oo kale ah, in marxaladaha hantidu ay ku beegmeen wabiga, oo leh pixel, oo leh mikron matagay oraah ee Google Earth.
Waqti ka, maps sax ah ujeedooyinka aan silica of geometers ka buuxsamay, oo ay go'aansatay in ay ka dhigi ellipsoid ah aysan awoodin in ay qabsadaan mesh ku geodesic, xawaaraha taargooyinka tectonic guureen miyigii qaaradda.
Kaasi waxa uu ahaa in uu heerka saxnimada, khasaaro ka mid ah tilmaamaha badan taas oo 15 taargooyinka tectonic dhulka dhaqaaqo la hagaajiyo in Da [geoid] tum ku haboon habka dhidibada inuu la qabsado sare ee centimitir kasta oo dhulka , sidaa darteed waxa ay noqotay model ah line kasta oo seefteedii oo latitudes iyo longitudes of 5 seconds ... ka dibna view shimbirro duulaya hor joogsaday radar qabashada ...
Miyey halkaas joogaan?
Post Previous«Previous Waa maxay mawjad la yaab leh oo dabiici ah
Post Next Hagaajinta Hantida ee GuatemalaNext »
2 Jawaabo "Sheeko la mid ah, hadda oo leh GPS"
hehehe, intee in le'eg ayuu shaqeynayaa ilaa sadex jeer shuruudaha si sax ah u hirgalay si markaa sanadaha 10 ay markale inooga sheegaan in gogoldhiggu uu xun yahay
... Waxa ay ahayd sannado badan in saxnimada ahaa calan kibir kiciyey ilaa nin u yimid database-Earth la xiriira la buur weyn ee Mars, sababtoo ah sida muuqata cuf lahaa on Earth waxaa keenaya yaraysi micro ... iyo wax walba oo ka tegey cadaabta mar kale ....! =)
Cillad aad u wanaagsan oo bilawday in la bilaabo nasashada Jimcaha ..!